विद्यार्थीले दुख्याे भनेपछि अधबैसे शिक्षककाे भयाे यस्ताे कर्तुतकाे पर्दा फास! -
विद्यार्थीले दुख्याे भनेपछि अधबैसे शिक्षककाे भयाे यस्ताे कर्तुतकाे पर्दा फास!
२४ आश्विन २०७५, बुधबार ०८:०३ 826 पटक हेरिएको
काठमाडौं । काभ्रेमा दुई बालिकालाई सोही विद्यालयका शिक्षकले बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले प्रक्राउ गरेको छ। बेथानचोक गाउँपालिकाको कालिका माविमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत ९ वर्षीया दुई बालिकालाई ललाई फकाई र धम्काएर निरन्तर एक वर्षदेखि कक्षा कोठामै बलात्कार गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले सोही विद्यालयका शिक्षक शंकर पहरीलाई पक्राउ गरेको हो।
बालिकालाई लोभ, डर, धम्कीमा कक्षा कोठामै बलात्कार गर्ने, यौन अंग खेलाउने, सुमसुमाउने गरेको पीडित बालिकाकी आमाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ। जाहेरीमा कक्षाकोठामा अन्य साथीलाई गृहकार्य गर्न लगाउने र उक्त बालिकालाई अन्तिम बेन्चमा राखेर यौन अंगमा औलाले चलाउने घुसारर्ने गरेको बालिकाले बताएकी छन्।
आरोपित शिक्षकले बालिकालाई कसैलाई भनेमा सबैको अगाडि पिट्ने धम्की दिएर कक्षा चारदेखि नै यौन अंग चलाउने गरेको बालिकालाई उद्धृत गर्दै आमाले बताएकी छन्।
आरोपितमाथि अनुसन्धान सुरू भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलका एसपी रविराज खड्काले जानकारी दिए। उनका अनुसार अदालतबाट अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थप भएको छ।